चाडपर्व नजिकिएसंगै सवारी दुर्घटना बढ्दो : २४ घण्टामा ३३ दुर्घटना, कतिको मृत्यु, कति घाईते ? - शुभयुग
चाडपर्व नजिकिएसंगै सवारी दुर्घटना बढ्दो : २४ घण्टामा ३३ दुर्घटना, कतिको मृत्यु, कति घाईते ?
४ कार्तिक,काठमाडौं – चाडपर्व नजिकिएसंगै काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् ।
गत २४ घण्टामा मात्र काठमाडौं उपत्यकामा ३३ ओटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
गएराति काठमाडौं महानगरपालिका–२६ शिव मन्दिर अगाडी स्कुटर पल्टिँदा गल्कोपाखा बस्ने अन्दाजी २४ वर्षीय दिपेश मल्ल ठकुरी को मृत्यु भएको छ । उनको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
बा. ७५ प ३४४० नम्बरको स्कुटर गएराति सवा १२ बजे पल्टिएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुले जनाएको छ । त्यस्तै हिजो बेलुका काठमाडौंको टेकुमा नम्बर खुल्न नसकेको मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ ।
घाईते हुनेमा प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार ३७ वर्षीय विजयकुमार केशरवानी रहेका हुन् । दुर्घटना गराएर फरार भएकाको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
त्यस्तै गत २४ घण्टामा मात्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सडक दुर्घटनाबाट एकको मृत्यु तथा १३ जना घाईते रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी